सिल्वरगेट इन्टरटेनमेन्टको नयाँ प्रस्तुती : प्रश्न एक उत्तर अनेक, भाग-३, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सिल्वरगेट इन्टरटेनमेन्टको नयाँ प्रस्तुती : प्रश्न एक उत्तर अनेक, भाग-३
काठमाडौं । सिल्वरगेट इन्टरटेनमेन्ट टीमको नयाँ प्रस्तुती प्रश्न एक उत्तर अनेक को तेस्रो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ ।
यो कार्यक्रम प्रत्येक १५ दिनमा एक पटक शुक्रबारका दिन विशेषगरी विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्ने उद्धेश्यले प्रशारण गरिन्छ । आजको यो तेस्रो श्रृङ्खलामा म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अर्थात् साँगितीक बाधबाद्नका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
यसै सिलसिलामा कार्यक्रमकी प्रस्तोता गोमा संग्रौला प्रसाई ले समाजका बिभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तित्वहरुलाई मनपर्ने बाधबादनका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ । कार्यक्रमको छायाँङ्कन अमेरिकाको वासिंटन डिसीस्थित वल्र्ड वार सेकेन्ड मेमोरियल पार्कमा गरिएको हो ।
कार्यक्रम सम्बन्धी थप जानकारीका लागि हेर्नुहोस् भिडियो: